မင်္ဂလာပါ ရွှေရွာသူရွာ သားများ နဲ့ အတ်ဒမင် ဆရာ ကိုခိုင် တို့ ကို ဦးစွာနှူတ်ခွန်း ဆက်ပါတယ်…။
ကျွန်တေ်ာက တော့ ဘာလို့ စာရေးချင်လာလဲဆိုရင် ကိုရထားတာလေးတွေ တခြား လူတွေလဲ သုံးလို့ ရအောင်သတင်း အချက် အလက်ပေးချင်တာပါ
အခုတင်ပြချင်တာက စကားပြောစက်ပါ ကော်ပရာ အမျိုးစား ၃ရမိုင် ပြောလို့ ရပါတယ် ဓါတ်ခဲရောအပါဝင် အား သွင်း စက်ပါ ပါဝင်ပါတယ် ၂၂ လိုင်း နဲ့ ကိုယ် ပိုင် လှိူ့ ဝှက် လိုင်း တွေလဲ ၁ချန်နယ် ကို ၃၈ လိုင်း ပြန်ခွဲ လို ရပါတယ် ထူးသဖြင် ခြေလျှင် တောင် တက် သူတွေ နဲ့ အမဲ လိုက် သူတွေ အပျော်ခရီး ထွက်သူတွေနဲ့ တောတွင်း လေ့လာ ရေးထွက်သူတွေပါ သုံးပြု နှိူင်ပါတယ် …
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..။အောက် ပါလင့် မှာ ပုံ ကို ကြည့်ရှူ့ နှိုင်ပါတယ်….. အခါ အားလျော်စာ စိတ် ဝင်စားပြီး အသုံးတည့်တဲ့ ပစည်း တွေကိုလဲ တင်ပြပေး သွားမှာပါ ခင် ခင် မင်မင် ပေါ့..
ကျွန်တော်တ င်ထားတဲ့ ပိုစ့်ကို ပြန် ကြည့် တာ မမြင်ရဘူးဖြစ်နေတယ် ဘာလို့လဲ မသိဘူး…။
1. မိမိစာနှင့် အနီးစပ်ဆုံးCategory (တခု)ကိုရွေးချယ်၍ပို့စ်တင်ပါ။ ((Copy/Paste Category)သည် ရှေ့မျက်နှာတွင်ပေါ်မည်မဟုတ်။)
ဘေးလိုင်းက Do &Don’t မှာ ပို့စ်တင်နည်းပြထားပါတယ်ဗျို့ ။
D Tin ရေကောင်းတယ်ဗျာ သိတာလေးတွေရှယ်ပါဗျာ အားပေးနေမှာပါနော်
ဒီတစ်ပုဒ်နဲ့ တင် ပျောက်မသွားနဲ့ဗျာ
တွေ ့ကြ ဆုံကြ
ပျော်ကြ ပါးကြဖို့. . .
ကျနော်က ”ဘယ်သူ ”ပါ
မြန်မာပြည် ကိုးနတ်ရှင် က Youtube ကြည့်ဖို့ အဆင်ပြေပါ့မလား မသိ။
.၃ရမိုင် ပြောလို့ ရတယ်ဆိုတော့ မဆိုးဘူးနော
…ဦးဦးမိုက်ရေ…သိထားသလောက် ကတော့လုံးဝမရပါခင်ဗျာ … ခရီးသွားကုန်ပဏီတွေ …တိုးအုပ်စုလိုက်ထွက်လို့ ..ရှေ့ကားနောက်ကားဆက်သွယ်ဖို့ စုံစမ်းတုန်းက …ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေနဲ့ညှိစွန်းပါသတဲ့ဗျာ…အိုင်ကွန်အမျိုးအစားက တော့ ငါးမိုင်ဝန်းကျင်ပဲရတယ်ခင်ဗျ .. ခြောက်သောင်းလောက်ရှိပါတယ်..ခင်ဗျ
လိုချင်တယ် ဆသရနဲ့ ညိနေလို့ ချိုထားတာ
camp gear အားလုံးလိုဂျင်တယ်
ကောင်းပါတယ်ရှင့် ကိုယ်သိတာလေးတွေ မျှဝေရင်း ရွာထဲမှာ ပျော်မွေ့ပါစေနော်။
ခုလိုတင်ပြတာလေးတွေလည်း အတော် ဗဟုသုတရရှိပါတယ်။
၃ရ မိုင်က ကြိုးမဲ့လား…. ကြိုးနဲ့လားရှင့်
ပြီးတော့ ဘယ်သူမဆို အသုံးပြုလို့ရပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့ ပါ ပစ္စည်းတန်ဖိုးက ကျပ် ငွေ ၈၅,၀၀ဝ လောက် ပေးရမှာပါ ကျွန်တော် အမြင်တော့ ဆသရမှာ လိုက်စင်တင် ရင် ရနှိုင်ပါမယ ်ထင်ပါတယ် ဘာလို့ လဲ ဆိုတေ့ာ ချောင်သာမှာ မော်တော်ဘုတ်လုပ်ငန်းတွေ မှာ သုံေးနတယ် ဆိုတော့ ခွင်ပြုထားတယ် လို ထင်ပါတယ် လိုက်စင် နဲ့ပေါ့..
အားပေးတဲ့ အားလုံး ခင် ခင် မင်မင် ကြိုဆိုတဲ့ အတွက ်ရော အရမ်းပီတိ့ဖြစ်မိပါတယ်..
၃ရ မိုင်ဆို ကြိုးမဲ့ပါ ၁မိနစ် ကို ၂၅ကျပ်ပေးစရာ မလို တော့ဘူးပေါ့ အားပြန်သွင်းပြီး သုံး ရုံ ဘဲနော်
အဟဲ .. မြန်မာပြည်မှာ ထောင်ထဲမှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေ မရှိပါဘူး ..
လိုအပ်လာမှ ဒီလို ဆက်သွယ်ရေးစက်တွေ တရားမဝင်ကိုင်လို့ပါဆိုပြီး ဆွဲထည့်ရုံပါဘဲ ..
ဘာမှ မဖြစ်ရင် ဘာမှ မလုပ်ပါဘူး .
သိပ်များလာတော့မှ မကိုင်ရ ဆိုပြီးအမိန့်ထုတ်မယ် .
ဒါပေမဲ့ တော်တော်များများမှာ သုံးနေကြတာပါဘဲ ……